George: Martin Vrijland
Lehilahy niantra izy, Wilson Boldewijn, izay hita teo amin'ny resaka nataoko taminy volana vitsivitsy lasa izay (jereo eto). Ny otrik'aretina amin'ny fitaovan'ny ondry dia toa ny ondry hafa ary noho izany toa tsy manohintohina. Wilson dia nanomboka andiana haino aman-jery misy ao aminy izay [...] ny teoria-mpiray tsikombakomba lehibe
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 26 Febroary 2019	• 10 Comments
Ny De Verleiders, orinasan-tsehatr'i George van Houts, dia voamariky ahy tamin'ny fanoheran-kevitra nifehy teo aloha. Ny fandaharana DWDD tamin'ny alatsinainy 25 Febroary farany dia nanome porofo mampiaiky; Ny vintana azon'ny mpijery ihany koa dia mahatsapa fa kely izany. Ny fandaharan'asa dia ohatra tena tsara amin'ny teknolojian'ny NLP. Mba hahafantaranao fa tsy maintsy manana [...]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 27 Novambra 2018	• 9 Comments
Ny Komitin'ny Mpitsoa-ponenana ho an'ny 911 dia nilaza fa nanenjika ny governemanta amerikana izany. Ny famoahana gazety an-tserasera ao amin'ny tranokalany dia mampiseho fa io didim-pitsarana io dia noraisin'ny DoJ omaly (sampan-draharahan'ny fitsarana, ny minisitry ny fitsarana amerikana). Mazava ho azy fa manantena ireo mpiray tsikombakomba rehetra izay mino fa ny 911 dia asa anaty, [...]
Total visits: 13.956.878